Virtualization: Gbanye GNU / Linux Distro gị na gburugburu ebe dabara adaba maka ya Site na Linux
Virtualization: Gbanye GNU / Linux Distro gị na gburugburu ebe kwesịrị ekwesị maka ya
La Virtualization Dịka echiche nke teknụzụ, ọ bụ isiokwu sara mbara, nke na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịkọwa, agbanyeghị, n'oge ndị ọzọ ekwuru ya na Blog, na-enye afọ ojuju.
N'ihi ya, mbipụta a chọrọ iji dozie esemokwu ahụ n'ụzọ dịtụ ntakịrị n'akụkụ akụkụ ọrụ aka nke GNU Linux / BSD Sistemụ arụmọrụ, na-emesi ike nke kachasị, na obere agwakọta ngwanrọ ngwanrọ n'ime ha ka ha rụọ ọrụ a.
Virtualization nke sistemụ arụmọrụ: Teknụzụ dịnụ maka 2019
1 Kedu ihe bụ Virtualization?
2 Virtualization: Ngwa dị mfe na nchịkọta dị
2.2 GNOME Igbe
2.3 Onye njikwa-njikwa
2.4 Nkemu / KVM
2.5 Ọba akwụkwọ na nchịkọta metụtara (dependencies)
2.6 ndị ọzọ
2.7 Ihe dị mkpa
Kedu ihe bụ Virtualization?
Na nkenke, anyị ga-ehichapụ a echiche si anyị gara aga metụtara post, nke mere na, ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mmasị chọrọ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ a iji mikwuo emi n'okwu a, ha nwere ya:
"The Virtualization nke Sistemụ nwere ihu ọma nwere ike ịkekọrịta n'otu ngwanrọ ahụ ọtụtụ sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ kpamkpam n'adabereghị, mana ha niile na-elekwasị anya na ịme ka ọ dị ntakịrị ma ọ bụ pekarịa ikike nke OS ọ bụla (ọbịa) ma ọ bụ onye nwe OS n'efu. ), iji nwalee ha na-enweghị a raara onwe ya nye draịvụ ike."
"Teknụzụ niile dị ugbu a nwere ọkwa dị iche iche nke nsogbu banyere ntinye ha, nhazi, ojiji na nnweta na nnweta nke akwụkwọ dị mkpa iji mara ya."
Virtualization: Teknụzụ dịnụ maka 2019
Virtualization: Ngwa dị mfe na nchịkọta dị
N’okpuru, anyị ga-ekwupụta ụfọdụ ngwa ama ama kacha mma na ebe niile na / ma ọ bụ ejiri ya na GNU Linux / BSD Sistemụ arụmọrụ, ma na nkeonwe, ya bụ, Distros eji maka nzube nkeonwe (ụlọ), na ngalaba ọkachamara, ya bụ, na mpaghara sava nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ndepụta a agaghị agụnye ndị ahụ teknụzụ dị iche iche na-abịa dị ka ihe etinyere, ihe niile-na-otu ma ọ bụ turnkey ngwọta, dị ka Nkwalite.
Virtualbox bụ a Pịnye 2 Hypervisor multiplatform, ya bụ, ọ ga-abụrịrị na a ga-egbu ya (wụnye ya) na ndị ọbịa ọ bụla (Kọmputa) nwere ụdị nke ugbu a ma ọ bụ nke ochie Sistemụ arụmọrụ Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS / 2, na OpenBSD.
Ndi nwere na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu na usoro okirikiri na mbipute ugboro ugboro, nke na - eme ya ihe ozo di nma na uzo ozo ndi ozo ọtụtụ atụmatụ na ọrụ, Sistemụ ọbịa na-akwado ya na nyiwe ọ nwere ike na-agba ọsọ.
Ọtụtụ n'ime GNU Linux / BSD Distro kwuru na ngwa a gụnyere na nchekwa, ya mere, na ndị na-esonụ iwu ịtụ arụnyere na ha niile:
Okwesiri ighota maka VirtualBox na, mgbe ị na-eji ngwa a, ntinye nke «Ọbịa mgbakwunye» na "Mgbatị Mgbatị". Ya mere, maka nke a na ụdị echichi ndị ọzọ, ihe kachasị mma bụ ileta ihe ndị a Njikọ njikọ VirtualBox. Ezie na, miri emi na ụfọdụ atụmatụ nke VirtualBox ị nwere ike ịga na anyị gara aga akwụkwọ metụtara ya:
Igbe GNOME bụ nwa afọ ngwa nke GNOME desktọọpụ, iji nweta sistemụ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ nke mebere. Ekebe ma ọ bụ Igbe, na-eji teknụzụ eji eme ihe QEMU, KVM na Libvirt.
Na mgbakwunye, ọ chọrọ ka CPU dakọtara na ụdị ụfọdụ nke ngwaike enyere aka na ntanetị (Intel VT-x, ọmụmaatụ); N'ihi ya, Igbe GNOME anaghị arụ ọrụ na CPUs na processor Intel Pentium / Celeron, ebe ọ bụ na ha enweghị àgwà a.
Ọ bara uru ịkọwapụta maka Igbe GNOME na, ọ bụ a dị mfe ngwá ọrụ iji novice ọrụ na newcomers na ụwa Linux, n'ihi na ọ naghị etinye ọtụtụ nhọrọ nhazi nke a na-ama nke ọma ma jiri ya na ndị ọzọ, dị ka Virtualbox. Iji mụtakwuo banyere nke a ngwa, ezigbo bụ ileta ndị na-esonụ GNOME Igbe igbe njikọ njikọ. Mgbe, ịmiwanye ike na ya na Blog anyị, ị nwere ike ịga leta akwụkwọ anyị gara aga metụtara ya:
Igbe Gnome bụ ezigbo ihe eji emeghe ngwa ngwa
Onye njikwa-njikwa bụ desktọọpụ onye ọrụ interface maka nlekọta nke Virtual Machine Manager site na libvirt. A na-eji ya eme ihe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ KVM, ma ọ na-ejikwa ndị ahụ ejiri Xen y LXC.
Onye njikwa-njikwa na-ewetara a nchịkọta echiche nke na-agba ọsọ ngalaba, ndụ ha arụmọrụ, na akụ itinye n'ọrụ akụ. The wizards na-ekwe ka ihe e kere eke nke ọhụrụ ngalaba, na nhazi na ukpụhọde nke akụ oke nke a ngalaba na mebere ngwaike. A ahịa ikiri VNC y UWA Integrated ewetara ihe eserese eserese zuru oke maka ngalaba ọbịa.
Ọ bara uru ịkọwapụta maka Onye njikwa-njikwa na, ọ bụkwa ihe dị mfe ngwaọrụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe ndị ọzọ zuru ezu karịa Igbe GNOMEYa mere, enwere ike ịtụle ya maka ndị na-ajụ ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu nke ọkwa mbụ, ebe ọ bụ na ọ dị nfe nke ikwe ka njikwa nke usoro ndụ niile nke igwe arụmọrụ dị adị. Iji mụtakwuo banyere nke a ngwa, ezigbo bụ ileta ndị na-esonụ Njikọ njikọ Virt-Manager. Mgbe, ịmiwanye ike na ya na Blog anyị, ị nwere ike ịga leta akwụkwọ anyị gara aga metụtara ya:
Qemu-Kvm + Virt-Manager na Debian - Netwọk Kọmputa maka SMEs
Nkemu / KVM
Nkemu bụ usoro ihe eji eme ihe na nke mepere emepe na-arụ ọrụ nke ọma na emulator, nwere ike ịme sistemụ arụmọrụ na mmemme emere maka otu igwe na igwe dị iche na arụmọrụ dị oke mma, ma nwee ike iru arụmọrụ dị nso site na ịgbanye koodu ndị ọbịa ozugbo na CPU n'aka onye nnabata.
KVM bụ ihe ngwọta zuru oke maka Linux na ngwaike x86 nke nwere mgbatị nkwado (Intel VT ma ọ bụ AMD-V) nke nwere usoro kernel a na-ebugharị, nke na-enye akụrụngwa akụrụngwa na usoro nhazi. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a n'ime Qemu.
Ọ bara uru ịkọwapụta maka Qemu-KVM nke bụkwa a nnọọ zuru ezu ngwá ọrụ, ebe ọ bụghị nanị na-e emomi kamakwa virtualizes, n'adịghị ka ndị ọzọ dokwara elu ndị dị ka WMWare, nke na-enye ohere naanị iji mezuo iwu. Iji mụtakwuo banyere nke a ngwa, ezigbo bụ ileta ndị na-esonụ Njikọ ọrụ Qemu-KVM. Mgbe, ịmiwanye ike na ya na Blog anyị, ị nwere ike ịga leta akwụkwọ anyị gara aga metụtara ya:
QEMU 5.1 dị ebe a wee bịa na mgbanwe mgbanwe 2500 ma ndị a bụ ihe kachasị mkpa
Ọba akwụkwọ na nchịkọta metụtara (dependencies)
Ihe ngwugwu 3 ikpeazụ ndị a kpọtụrụ aha na-etinyekarị ndị ọzọ metụtara (metụtara) dị ka ndị ịdabere, yabụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ha nwere ike ịwụnye ha, yana ndị ịdabere na ha na ngwugwu ndị ọzọ bara uru, na-eme iwu na-esonụ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ọzọ teknụzụ dị iche iche dị na Linux / BSD ị nwere ike ịhọrọ:
Wụnye ya na iwu iwu:
Wụnye ya na-eso nke anyị gara aga metụtara post na isiokwu:
Cheta na aha ngwugwu niile akpọrọ ebe a nwere ike ịdịtụ ntakịrị dabere na GNU Linux / BSD Distro jiri gị, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ọsọ nke otu, nyochaa aha onye ziri ezi ma ọ bụ otu ihe na Distro gị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Tecnologías de virtualización» kwuru okwu ya ebe a, n'ihi na ya mfe nke echichi na nnweta n'elu ọtụtụ ndị GNU / Linux Distros; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Virtualization: Gbanye GNU / Linux Distro gị na gburugburu ebe kwesịrị ekwesị maka ya
Onye Uda dijo
Naanị m chọrọ ịmara na n'ezie Gnome Boxes na-arụ ọrụ, ọbụlagodi, na Celeron 3350, yana ụdị nke ngwa Arch Linux nyere.
Ekele, Voimer. Daalụ maka okwu gị ma tinye ahụmịhe gị gbasara igbe Gnome.
Ezigbo uzo ozo, nke m jiri, bu GNU / Debian na Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster
Ana m ekele gị nke ukwuu maka edemede a!
Ekele, José Luis. Daalụ maka okwu gị. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu na ọ baara gị uru ma baa ọgaranya.
Google gwara GitHub ka o gbochie nchekwa 135 Widevine metụtara